Monday June 05, 2017 - 07:47:30 in Somali News by
Wasaaracda shaqada ee dowlada federaalka ayaa noqotay meel uu hareeyay musuq maasuq ba'an. Tan iyo markii uu yimid Wasiir Saalax Axmed Jaamac ayaa waxaa soo wajahay wasaarada jahawareer dhaqaale iyo xatooyo lacageed.
Wasiir Saalax ayaa gabi ahaan la wareegay maamulka lacagta ee wasaarada asaga oo u dhiibtay C/risaaq Maxamed Maxamud. Lacagtii ugu horeysay ee uu Saalax kala baxay account-ka wasaarada ayaa aheyd 17 kun oo dollar oo kasoo xarootay Work Permit ka sida uu sheegay C/risaaq Macalin Cilmi oo ka shaqeeya wasaarada shaqada. Lacagtan ayaan la aqoon meel ay jaan iyo cirib dhigtay balse la og soon yahay in ay tahay mid ku maqan jeebka Saalax Axmed Jaamac.
Saalax ayaa sidoo kale waxaa uu wasaarada accountkeeda kala baxay lacag dhan 23 kun oo dollar taasoo ah lacag loogu talagalay dabaal dega maalinta shaqaalaha taasoo RW Xasan Kheyre ugu deeqay. Lacagtan ayaa waxaa la aaminsan yahay in aad uga yar ay ku baxday xafladii maalinta shaqaalaha adduunka.
Waxyaabaha shaqaalaha wasaarada ka yaabiyay ayaa waxaa ka mid ah in madaxii maamulka iyo maaliyada ee wasaarada Safiya Abuukar Karaani shaqada lagala wareegay oo aysan heynin, asana maamulin wax lacag ah gabi ahaan uuna wasiir saalax u dhiibto lacagta C/risaaq Maxamed Maxamud. Saalax ayaa ciyaarta uu dheelaya ay tahay in uu iska horkeeno C/risaaq iyo Safiyo oo isku qabiil kasoo jeeda.
Arrintii ugu yaabka badneed ayaa dhacday kadib markii uu wasiirka shaqada Saalax Axmed Jaamac weydiistay labada qof ee ku saxiixan account-ka wasaarada in ay u saxiixan jeegag maran si uu asaga lacag aysan ogeyn ugula baxo. Falkan ayaa ah musuq maasuq iyo maamul xumo lagula kacayo hantida dalka.
Accountka wasaarada ayaa waxaa horey ugu saxiixnaan jiray wasiir ku xigeenkii hore Cismaan Libaax, xoghayaha joogtada Xasan Shariif iyo madaxa maamulka maaliyada Safiya Abuukar Karaani. Maadama uu Cismaan Libaax ka wareegay wasaarada, Saalax waxaa uu hor istaagay in uu wasiir ku xigeenka wasaarada C/casiis Carmaan lagu badalo booskii Cismaan Libaax sida uu dhigayo nidaamka.
Saalax Axmed ayaa ka baqaya in haddii C/casiis Carmaan lagu qoro account-ka uu ka hor istaago lacagaha sida aan masuuliyada ku jirin loo lunsanaayo.
[Daawo] isfaham waaga Somalida oo lagu cabiray sheeko filim qosol badan
Daawo isfaham waaga Somalida oo lagu cabiray sheeko filim qosol badan Full Article
[Daawo] heestii ugu shidneed Xamar lagu duubay
Daawo heestii ugu shidneed Xamar lagu duubay Full Article
[Daawo] banaanbaxii ugu weeynaay ee lagu diiday qabyaaladda Madaxweynaha HirShabelle
Daawo banaanbaxii ugu weeynaay ee lagu diiday qabyaaladda Madaxweynaha HirShabelle Full Article